ဗုံးကွဲမှု သံသယဖြင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် | AAR - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
← ယူအန်ကို အန်ချင်တယ်
ဂီရိ ဒုက္ခသည်များ ရေရှားပါးမှုကြုံနေ →
ဗုံးကွဲမှု သံသယဖြင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်
မတ်လ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်။
ရန်ကုန်တိုင်း အင်းစိန်မြို့နယ် အောင်ဇေယျအိမ်ရာတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဗုံးကွဲမှု သံသယဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်း မြို့နယ်များရှိ ရခိုင် တိုင်းရင်းသား ၁၀၀ ခန့်ကို အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီး နှိပ်စက် စစ်မေးကြောင်း သိရသည်။
Home-made-bomb ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွင် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရ သတင်းစာများက တရားခံဟု ဖော်ပြသူနှင့် အောင်ဇေယျ အိမ်ရာတွင် အတူနေထိုင်သူမှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား တဦးဖြစ်ပြီး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် သွားသဖြင့် အင်းစိန်၊ လှိုင်သာယာ အပြင် တခြားမြို့နယ်များမှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကိုပါ လိုက်လံဖမ်းဆီး စစ်မေးနေခြင်းဖြစ်သည်။
လှိုင်သာယာမြို့နယ် ရခိုင်မောင်မယ်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောလှအောင်ကို လှိုင်သာယာမြို့နယ် ရဲစခန်းက ၄ ရက်ကြာ ဖမ်းဆီးပြီး ရိုက်နှက် စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း၊ စစ်ဆေးစဉ် အတွင်း လူမျိုးရေး စော်ကားသည့် အသုံးအနှုန်းများဖြင့် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ဦးစောလှအောင်နှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
ရခိုင်အမျိုးသားများဖြစ်သည့် ကိုကျော်လှစိန် (၂၇နှစ်)၊ ကိုအောင်မြသန်း (၃၁နှစ်) တို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးကိုလည်း ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ကိုအောင်မြသန်းကို ၄ ရက်ကြာတွင် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သော်လည်း ကိုကျော်လှစိန်ကို ၁၀ ရက်ကြာ နှိပ်စက်စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း၊ ထိုးကြိတ် ရိုက်နှက်ခဲ့သဖြင့် ဦးခေါင်းတွင် ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး စိတ်မူမှန်ဖြစ်နေကြောင်း ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင် တဦးက ဆိုသည်။
၎င်းက “လတ်တလောမှာ စိတ်မူမှန်တော့ဘူး။ ဘယ်သူလာလာ ကျနော့်ကို မရိုက်ပါနဲ့၊ မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးပဲ ပြောနေတယ်။ လောလောဆယ်တော့ စိတ်ရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်တွေနဲ့ ပြနေရတယ်။ ဒါမှ မရရင်တော့ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံ တင်ရမယ်ပြောတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
တခြားသော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများဖြစ်သည့် ကိုသက်တင်ဟန် (၂၆နှစ်) ကို ၄ ရက်ကြာ၊ မောင်စောရွှေ ( ၂၇ နှစ်) ကို ၁၀ ရက်ကြာ၊ ကိုသက်တင်ဟန်၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ရဲတပ်ကြပ်ကြီး ဦးအောင်ကျော်ဝေကို ၂ ရက်ကြာ အသီးသီး ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း ရခိုင်မောင်မယ် အသင်းဝင်များထံမှ သိရသည်။
ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးမှုများကို လှိုင်သာယာနှင့် လှည်းကူးမြို့နယ် ရဲစခန်းတို့မှ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး လူမျိုးရေး စော်ကားသည့် စကားများပြောဆိုကာ ရိုက်နှက်ခဲ့သူများတွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ် ရဲအထူးသတင်းတပ်ဖွဲ့မှ မြင့်ဦး၊ စခန်းမှူး လှအောင်၊ လှည်းကူးမြို့နယ်မှ ဒုရဲမှူး အောင်မြင့်၊ ဖောင်ကြီးရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ် ကျော်ဆန်းလင်းတို့ ပါဝင်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့က ငါ ဘယ်သူကွဟု ပြောဆိုပြီး ရိုက်နှက်ဆဲဆိုသဖြင့် မှတ်မိခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူများက ဆိုသည်။
စစ်ဆေးနေစဉ်တွင် လှည်းကူးရဲစခန်းမှ ဒုရဲမှူး အောင်မြင့်နှင့် အဖွဲ့က လူမျိုးရေး စော်ကားမှုများ ပြောဆိုပြီး အဖွဲ့လိုက် ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ကြောင်း၊ ညို့သကျည်းကို မျဉ်းလုံးဖြင့် လှိမ့်ခြင်း၊ ထုတ်တန်းတွင် ဇောက်ထိုးဆွဲ၍ ရိုက်နှက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အမည်မဖော်လိုသည့် ဖမ်းဆီး စစ်မေးခံရသူတဦးက “ကျနော်တို့ မခံနိုင်ဆုံးကတော့ မအေ၊ နှမတွေနဲ့ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ဆဲတယ်။ တချက်ရိုက်တိုင်း လူမျိုးကို စော်ကားတယ်။ ဆဲတယ်။ ကျနော်တို့နဲ့လည်း ဘာမှ မပတ်သက်ဘူး။ တရားခံလည်း မဟုတ်ဘူး။ တရားခံ မဟုတ်လို့ လက်ထိပ်မခတ်ပါနဲ့ဆိုတော့ သူတို့က မင်းတို့တွေကို နှိပ်ကွပ်ချင်နေတာကြာပြီ၊ အမှုနဲ့တကယ် မပတ်သက်လည်း ထောင် မကျ ကျအောင် ချမယ်၊ ကြည့်မရတာကြာပြီဆိုပြီး ပြောတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ဗုံးဖောက်ခွဲရာတွင် ဒဏ်ရာရခဲ့သည့် တရားခံဆိုသူ ခေါ်ယူအသုံးပြုလေ့ရှိသော ရခိုင်တိုင်းရင်းသား အငှားယာဉ်မောင်းတဦးကိုလည်း ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ညို့သကျည်းကို မျဉ်းလုံးဖြင့် လှိမ့်သဖြင့် ခြေထောက်တွင် ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရပြီး လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဖမ်းဆီး စစ်မေးခံရသူများကို အကူအညီပေးနေသူတဦးက ဤကိစ္စများကို သက်ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြားမည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ “စစ်ဆေးခံရတဲ့သူတွေအားလုံး ဘာမှပတ်သက်မှုမရှိလို့ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီ။ ဒါပေမယ့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအပေါ် အနိုင်ကျင့်တာတွေကိုတော့ သူတို့ပြန်တာဝန်ယူရမှာပါ” ဟု ပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ အနိုင်ကျင့်စော်ကားခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရခိုင်လူမျိုးစုလွှတ်တော်အတွက် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဦးဇော်မောင်ကို အကြောင်းကြားထားသော်လည်း တစုံတရာ အကြောင်းပြန်ကြားခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား တဦးက “ရခိုင်အမျိုးသားတွေရဲ့ အရေးကိစ္စတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ရခိုင်အမျိုးသားတွေက မဲပေးရွေးချယ်ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စကို ဘာမှ ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်တာ မတွေ့ရဘူး။ ဒီလိုဖြစ်နေတာတောင် ကျနော်တို့ ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားမှ သိတယ်။ သူဘာမှ မသိဘူး” ဟု ဆိုသည်။
၂၀၁၀ အတွင်း နိုင်ငံအနှံ့ ၈ နေရာတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ ၁ ဒါဇင်ကျော်နှင့် ဒဏ်ရာရသူ ၁၉၀ နီးပါး ရှိခဲ့သည်။
စစ်အစိုးရသည် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပွားပါက ပြည်ပအခြေစိုက် အစိုးရဆန့်ကျင်သော အဖွဲ့အစည်းများ၏ လက်ချက်ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုစွပ်စွဲလေ့ရှိသည်။
Posted on March 24, 2011, in သတင်းကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.